I-FORTE DEI MARMI Indlu ekwi-150 yeemitha ukusuka eLwandle
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguSidrak
USidrak ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
I-VILLA MARYGRACE ngumgangatho ophezulu we-villa ebekwe e-Forte dei Marmi phantse elunxwemeni, kwi-2 mins elula ukuhamba. Le ndlu inomnyango wabucala owahlukileyo kwaye kumgangatho osezantsi uhlala umnini othobekileyo uMaria Grazia.
I-VILLA MARYGRACE ngumgangatho ophezulu we-villa ebekwe e-Forte dei Marmi phantse elunxwemeni, kwi-2 mins elula ukuhamba. Le ndlu inomnyango wabucala owahlukileyo kwaye kumgangatho osezantsi uhlala umnini othobekileyo uMaria Grazia. Indlu inendawo yokupaka ebiyelwe yabucala, iBarbeque, igadi enetafile kunye nezitulo + iisofa ezisetyenziselwa iindwendwe kuphela. Igumbi lokuhlala line-tv kunye ne-SKY CHANNELS (iifilimu ngesiNgesi), i-WIFI, ikhitshi exhotyiswe ngokupheleleyo kunye ne-terrace.
Umoya womoya ukwigumbi lokuhlala kuphela.
I-COVID_19 UMGAQO-NKQUBO WOKURHOXA NGO-2021 NO-2022 WOKUBHEKISHA
Kula maxesha anocelomngeni siyayiqonda inkxalabo yakho xa ugcina indawo, kwaye sifuna ukuqinisekisa ukuba uziva ukhuselekile kwaye uqinisekile ukuba ugcina indawo ngokusebenzisa thina. Ke ngoko sazise umgaqo-nkqubo wokurhoxisa obhetyebhetye ngakumbi, wokubhukisha owenziwe emva kukaNovemba ka-2020, nabafikayo ngo-2020, 2021 nango-2022. Kwimeko yezithintelo zokuhamba zikaRhulumente wase-Italiya ngenxa ye-COVID_19 siya kunika iindwendwe zethu ithuba lokucwangcisa kwakhona ugcino kumhla wexesha elizayo. Ukuba awukwazi ukwenza isigqibo ngomhla ngokukhawuleza siya kukhupha ivawutsha, onokuyisebenzisa kuyo nayiphi na indawo yokubhukisha kwixesha elizayo, kuyo nayiphi na indawo yethu. Siyaxolisa kodwa asikho kwimeko yokuthathela ingqalelo izithintelo zokuhamba ezikhutshwe ngabanye ooRhulumente, okanye ukurhoxiswa kweenqwelomoya.
4.77 · Izimvo eziyi-43
Umbuki zindwendwe ngu- Sidrak
Izimvo eziyi-1 740